आज हनुमान जयन्ती मनाइँदै, के छ हनुमान स्मरणकाे महत्व ? « News24 : Premium News Channel
आज हनुमान जयन्ती मनाइँदै, के छ हनुमान स्मरणकाे महत्व ?
काठमाडाैँ । प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रामभक्त हनुमान जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइँदै छ । चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन हनुमानको पूजा-आराधना गरेमा बल, बुद्धि र विद्या मिल्ने तथा दुःख र सङ्कटबाट मुक्ति पाइने विश्वास छ । यस अवसरमा हनुमानढोकास्थित हनुमानको मूर्ति, पशुपतिस्थित हनुमान मन्दिर, गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा रहेको पञ्चमुखी हनुमानलगायत देशभरका हनुमान मन्दिरमा पूजा आराधना गरिन्छ । हनुमानढोका दरबारको नासलचोक नजिकै रहेको पञ्चमुखी हनुमान मन्दिरमा भने पुजारीले मात्र पूजा आराधना गर्ने चलन छ ।
वेगवान् गतियुक्त शक्ति
हनुमानको मूर्तिमा सिन्दुर लगाइएको हुन्छ । सिन्दुरले हड्डी एवं मांशलाई सुसङ्गठित शरीर निमार्णमा भूमिका खेल्दछ । यस अवसरमा आज देशभरका हनुमान मूर्ति एवं मन्दिरमा पूजा आराधना गर्नुका साथै शोभायात्रा निकालिन्छ । यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै कोरोनाको जोखिम बढेकाले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर जात्रा मनाउन आह्वान गरिएको छ । मङ्गलबार र शनिबार हनुमानको विशेष आराधना गर्ने गरिएकामा यस वर्ष हनुमान जयन्ती मङ्गलबार नै परेकाले पनि विशेष अवसर मानिएको छ । आज हनुमानको आराधना गर्नु अझ राम्रो हुने धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ ।
कारोना महामारीका कारण प्रसिद्ध बाराही जात्रा प्रभावित
मकवानपुर । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा प्रत्येक तीन वर्षमा लाग्ने प्रसिद्ध बाराही जात्रा कारोना महामारीका कारण यस
रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा आज, सांकेतिक रूपमा सम्पन्न गरिँदै
काठमाडौं । आज (शनिबार) रातो मत्स्येन्द्रनाथको ‘सांकेतिक’ रथयात्रा हुने भएको छ । ललितपुरस्थित पुल्चोकमा आज
सावधानीपूर्वक घरमै नमाज पाठ गरी इदुल फित्र मनाइँदै, मस्जिदहरू सुनसान
काठमाडाैँ । अरबी पात्रो हिजरी संवत्अनुसार दशौँ महिना (सौवाल) को पहिलो दिन आज देशभरका इस्लाम
कोरोनाले गर्दा यस वर्ष पनि हरायो इदको रौनक
कपिलवस्तु । विगत दुई वर्षदेखि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु सामुहिक रुपमा ईदगाहमा नमाज नपढेर आ-आफनो घरमा नै
सेनाद्वारा अक्सिजन आपूर्तिमा सरकारलाई सहयोग
नाष्टमा अक्सिजन सिलिन्डरको सफल परीक्षण
पर्यटन क्षेत्र पुनः चलायमान बनाउन विशेष राहतको कार्यक्रम आवश्यक’